ဦး နှောက်တွင်းရှိ Dopamine ပမာဏကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အရက်ကိုတွန်းအားလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ လေ့လာမှုပြပွဲ (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
အဆိုပါဦးနှောက်အတွက် Normal Dopamine Levels နဲ့အရက်တဏှာလေ့လာမှုရှိုး (2015) ကိုလျှော့ချနိုင်မလား
US မှာထက်ပို 16 သန်းလူကြီးများအနေနဲ့အရက်သေစာသုံးစွဲရောဂါရှိ
တစ်ဦးကသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုအရက်မှီခိုသည့် dopamine system ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်ပါတယ်ပြသခဲ့သည်။
Gautam Naik အောက်တိုဘာ 14, 2015 12: 27 ညနေ ET
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဦးနှောက်အတွင်းရှိ dopamine အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသောက်စရာအပေါ်မှီခိုသောလူများတွင်အရက်မတရားသောလျှော့ချနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုလေ့လာမှုများ, လူတွေအပေါ်ကောက်ယူတယောက်နှင့်ကြွက်များအပေါ်တဦးတည်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ လူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးများတွင်စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးကိုယူတဲ့သူလူနာအရက်တဏှာအတွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးပြခဲ့တယ်။ တစ်ဦးကသီးခြားတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေး dopamine အဆင့်ဆင့်ပေါ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
အရက်မှီခိုသည့် dopamine system ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်ပါတယ် "ဒါဟာ concept ကိုသက်သေပြက" ပီ Steensland, ဆွီဒင်အတွက်, Karolinska Institute မှာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများပူးတွဲရေးသားသူကပြောပါတယ်။ ရလဒ်ကိုစိစစ်ဖို့ "ကျနော်တို့ပိုကြီးတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်" ။
အရက်မှီခိုဘို့လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများအထူးသဖြင့်ထိရောက်သောမရှိကြပေ။ လူနာများ၏လူဦးရေဗီဇကွဲပြားခြားနားဖြစ်တယ်, ဒါသာအခြို့သောလူမျိုးကွဲအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ ဆေးညွှန်းနှုန်းထားများအနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဆေးဝါးများဘို့လိုအပ်ကြောင်းကြီးမားသည်။
အရက်ဟာဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် system ကိုသုခချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုထွက်လာပါတယ်, ပုံမှန်ထက်ပို dopamine လွှတ်ပေးရန်စေသည်။ ပိုပြီးအရက်မူးသကဲ့သို့ဒါပေမယ့်ပိုအကျိုးကို system ကို desensitized ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လျော့နည်း dopamine ဖြန့်ချိသည်။ နောက်ဆုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပျော်ရွှင်ဖွယ်ခံစားရရန်, ဒါပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်တစ်ပြည်နယ်မှီဖို့မင့်ကိုပိုပြီးအရက်ကိုသောက်။ ထို့ကြောင့်စွဲအတွက်သတ်မှတ်။
US မှာထက်ပို 16 သန်းလူကြီးများအနေနဲ့အရက်သေစာသုံးစွဲရောဂါရှိသည်နှင့်နီးပါး 88,000 ကလူကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes သည်နှင့်အညီ, အရက်-related အကြောင်းတရားများကနေနှစ်စဉ်သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ 2006 မှာတော့အရက်အလွဲသုံးစားလုပ်အမေရိကန်စီးပွားရေးကို $ 223.5 ဘီလျံအထိကုန်ကျသည် NIH ကဆိုသည်။
ဂျာနယ်တွင်ဥရောပ Neuropsychopharmacology အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ဝေလူ့လေ့လာမှုသည်သိပ္ပံပညာရှင်များပုံမှန်အားစပျစ်ရည်ကိုတစ်ပုလင်းတစ်နေ့၏ညီမျှသောသောက်ရမညျ့သူ 56 ဆွီဒင်အရက်သေစာမှီခိုယောက်ျားမိန်းမတို့, စုဆောင်း။
သင်တန်းသားများကိုကအနည်းဆုံးလေးခုနေ့ရက်ကာလအဘို့သောက်ရှောင်။ ဝက်ထို့နောက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေးထားတဝက် OSU6162, dopamine အဆင့်ဆင့်တည်ငြိမ်ယုံကြည်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးရတယ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလူနာ randomized သူတို့မဟုတ်သလိုသုတေသီမစမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးရတဲ့ခဲ့သူရလဒ်များအရအိပ်ယာရတဲ့သူသိတယ်ခဲ့ကြသည်။
နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့, သင်တန်းသားများကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သလောက်သောက်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက် 15 တွင်, လူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသောက်တစ်ဖန်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ, OSU အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်တာရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးငုံခံစားမဟုတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သွန်းလောင်းပြီးဆုံးခဲ့သည်ပြီးနောက်, OSU အဖွဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရက်များအတွက်အနိမ့်တဏှာကဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, abstinence-တုံ့ပြန်စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးဖို့အကောင်းဆုံးကာလပြီးနောက် relapse ပိုမိုအန္တရာယ်မှာအရှင်အဆင်းရဲဆုံးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်-နှင့်အတူရှိသူများ။
အဆိုပါ OSU နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးမှသာပျော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia ကုသရန်အသုံးပြုရှိသူများကဲ့သို့သောအခြား dopamine-based ဆေးဝါးများ, လုံးဝ dopamine ပိတ်ဆို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပျို့အဖြစ်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ, ဦးတည်သွားစေနိုငျသောကွောငျ့ဤအသိသာသည်။
OSU6162 ဖို့အခွင့်အရေးများ Arvid Carlsson, ပါမောက္ခဆွီဒင်အတွက် Sahlgrenska Academy ကိုမှာဂုဏ်ထူးဆောင်နဲ့လူ့လေ့လာမှု၏ Co-စာရေးဆရာကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ 92 နှစ်ရှိဒေါက်တာ Carlsson, dopamine ဦးနှောက်ထဲမှာ transmitter ကိုကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာများအတွက်ဆေးဝါးများအတွက် 2000 နိုဘယ်ဆုအတွက် shared ။ သူ့အဖွဲ့မှာလည်း OSU6162 တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ပိုကောင်း OSU6162 အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုနားလည်စေရန်, ဒေါက်တာ Steensland နှင့်အခြားသုတေသီများကိုလည်းဂျာနယ်စွဲဇီဝဗေဒအတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ဝေကြွက်အပေါ်သီးခြားလေ့လာမှုကိုပြု၏။ ဆန္ဒအလျောက်တစ်နှစ်နီးပါး၏သင်တန်းကျော်အရက်ကိုသောက်ကြောင်းကြွက်မျှအရက်သောက်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များထက်နိမ့် dopamine အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ OSU6162 အဆိုပါပေးခဲ့သည့်အခါ "အရက်ကြွက်," မိမိတို့၏ dopamine အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်ပြန်သွားကြ၏။
လူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးပြည့်ပြည့်စုံစုံစမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးလူတွေလျော့နည်းသောက်ရကူညီနိုင်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလားအလာအစောပိုင်းအဆင့်ရလဒ်များဒေါက်တာ Steensland နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ယခုပိုပြီးအများအပြားလူနာပတျသကျတဲ့ရေရှည်စမ်းသပ်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ 14, 2015
ဆွီဒင်နိုင်ငံ Karolinska Institute နှင့် Sahlgrenska Academy ကိုမှာသုတေသီများအရက်မှီခိုများအတွက်ထိရောက်သောမူးယစ်ဆေးရှာတွေ့မှပိုနီးစပ်တဦးတည်းခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ နှစ်ခုသီးခြားလေ့လာမှုများမှာတော့သူတို့က dopamine stabilizer OSU6162 အရက်မှီခိုသောလူများတွင်အရက်များအတွက်တဏှာကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွင်းအရက်ကိုလောင်ပြီကြွက်၏ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ် dopamine ၏အဆငျ့ normalises နိုင်ပါသည်။ ပြသ သို့သျောလညျးနှံ့နှံ့စပ်စပ်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ OSU6162 လည်းအရက်မှီခိုသောလူလျော့နည်းအရက်မသောက်ရကူညီနိုင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
Karolinska Institutet ၏လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံဌာနမှတွဲဖက်ပါမောက္ခ Ph.P Steinsland က“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုရလဒ်တွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်ထဲရောက်အောင်ဆေးမမှီခင်သွားရမယ့်လမ်းတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ လေ့လာမှုများ။ "အရက်၏လူမှုစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်လူ့ဆငျးရဲဒုက်ခဖော်ပြရန်မကြီးမားသည်။ ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လှုံဆော်ပေးနေတယ်။ ”
အကြမ်းအားဖြင့်တစ်ဦးသန်းဆွီဒင်နိုင်ငံသားအရွယ်သောက်၏ 15 နှစ်ပေါင်းသူတို့ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေအန္တာရာယ်နှင့်ဤလူမျိုးအချို့ 300,000 မှီခိုဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းကြောင်းဤမျှလောက်အရက်ကျော်။ အဆိုပါနှိပ်လိုအပ်နေသော်လည်း, သာအနည်းငယ်အရက်မှီခို၏ကုသမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများလူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ဆေးညွှန်းနှုန်းထားများအနိမ့်များမှာရှိပါတယ်။ အကျိုးဆက်အရက်မှီခိုအသစ် ပို. ထိရောက်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
OSU6162 ၏လေ့လာမှုများဘယ်လိုသိကျွမ်းခြင်းပညာအပေါ်အခြေခံထားတယ် ဦးနှောက်ဆုလာဘ် စနစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြုမူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆော်။ မှစ. dopamine ကောင်းမွန်သောအစားအစာကိုစားသောအခါသို့မဟုတ်အစာစားခြင်းကဲ့သို့သောသာယာဝပြောမှုခံစားမှုကိုဖန်တီးပေးသည်၊ မှတ်ဥာဏ်သည်၎င်းနှစ်ခုကိုဆက်နွယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုအမူကိုပြန်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ အရက်သေစာသည် ဦး နှောက်၏ဆုချီးမြှင့်မှုစနစ်ကိုသာမန်အားဖြင့် dopamine ကိုပိုမိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီးပျော်စရာကောင်းသောပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေသည်။ သို့သော်အရက်အလွန်အကျွံသောက်လေလေဆုလာဘ်စနစ်ကိုပိုမိုတင်းမာလာလေ dopamine နည်းလေလေဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှမူးယစ်ဆေးဝါးပြန့်ပွားရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန်အရက်ပမာဏများများလိုအပ်သည်။
ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောလက်တွေ့လေ့လာမှုထဲမှာ သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ် ဥရောပ NeuropsychopharmacologyOSU6162 နှင့်အတူလူအတွက်အရက်များအတွက်တဏှာကိုလျော့ချနိုင်လျှင်¸သိပ္ပံပညာရှင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လေ့လာ အရက်မှီခို။ ထက်ဝက်ပါဝင်သူနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအရက်တစ်တပ်မက်ထုတ်ယူနိုင်ရန်ယူဆနိုင်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ပြီးသောအပြီးနှစ်ပတ်များအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်အတူ OSU6162 တဝက်နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါရလဒ်များစမ်းသပ်အုပ်စုသည်အရက်အဖျော်ယမကာများထဲမှဖန်သောက်သုံးပြီးနောက်အရက်တစ်တပ်မက်၏လျော့နည်းကြုံတွေ့ကြောင်းပြသပါ။
“ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ OSU6162 အဖွဲ့ကပထမအရက် zip ကိုအရက်မသောက်ဘဲများများစားစားမသောက်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့တယ်” ဟုဒေါက်တာစတီးစလန်ကပြောသည်။ “ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒုတိယတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့အဆင်းရဲဆုံးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူ၊ အူစန်တာကာလပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အန္တရယ်အများဆုံးလို့ယူဆရတဲ့သူတွေက OSU6162 ကုသမှုကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်”
သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်ထဲမှာတစ်ချိန်တည်းမှာထုတ်ဝေကြွက်၏လေ့လာမှုတစ်ခု စွဲဇီဝဗေဒ OSU6162 မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ထပ်လောင်းပြောကြားသည်မှာတစ်နှစ်နီးပါးခန့်အရက်ကိုစိတ်လိုကိုယ်လျောက်စားသုံးခဲ့ကြသောကြွက်များသည်အရက်မသောက်ဖူးသည့်ကြွက်များထက်သူတို့၏ ဦး နှောက်ဆုလာဘ်စနစ်တွင် dopamine ပမာဏနည်းပါးကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော် "အရက်ကြွက်များ" ကို OSU6162 ဖြင့်ကုသသည့်အခါ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည် ဦး နှောက်ဆုချသည့်စနစ်တွင် dopamine ပါဝင်မှုနိမ့်ကျမှုကိုတန်ပြန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
"ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် OSU6162 ကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုထင်သည် အရက် သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ၏ downregulated အဆင့်ဆင့်ပြန်အားဖြင့်မှီခိုလူတဏှာ ဆုလာဘ်စနစ်က ပုံမှန်အနေအထားအထိရောက်အောင်သွားဖို့ပဲလိုတယ်” ဟုဒေါက်တာ Steensland ကပြောကြားသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: 'Monoamine တည်ငြိမ်စေမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (-) - အရက်ကိုမှီခိုသူတစ် ဦး ဦး အတွက်စွဲလမ်းခြင်းအပေါ် OSU6162 - လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှု'၊ Lotfi Khemiri, Pia Steensland, Joar Guterstam, Olof Beck, Arvid Carlsson, Johan Franck, Nitya Jayaram-Lindström, ဥရောပ Neuropsychopharmacologyအွန်လိုင်း6အောက်တိုဘာလ 2015, Doi: org / 10.1016 / j.euroneuro.2015.09.018 ။
'The Monoamine Stabilizer (-) - OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံးသော Wistar Rats များ၏နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုတွင် Down-Regulated Dopamine ထွက်ရှိမှုကိုတန်ပြန်သည်' Kristin Feltmann, Ida Fredriksson, Malin Wirf, BjörnSchilström, Pia Steensland, စွဲဇီဝဗေဒအွန်လိုင်း 14 အောက်တိုဘာလ 2015, Doi: 10.1111 / adb.12304.